Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo la kulmey Madaxweynaha Jabuuti “Sawirro” - Wargeyska Faafiye
Home 2015 March 14 .Warka Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo la kulmey Madaxweynaha Jabuuti “Sawirro”
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Mudane Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 14-3-2015 Jabuuti kula kulmay Madaxweynaha Dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Kulanka uu Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Camey la qaatay Madaxweyne Dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa kala qeyb-galay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland Maxamuud Xasan Soocade, Wakiilka Puntland ee Djabuuti Saciid Mahdi Cabdi, la taliyaha Madaxweynaha Puntland Cali Cabdi Awaare, xiriiriyaha xafiiska Madaxweynaha Puntland ee arrimaha macdanta Cabdicaziiz Maxamuud Cali (Xaaji Sayn) iyo mas’uuliyiin kale.
Kulan gaar ah ayaa Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland Mudane Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo Madaxweynaha Dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ay wada qaateen, iyagoo wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale kor u qaadista xiriirka Ganacsi .
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Mudane Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa madaxweynaha dalkaasi uga mahad celiyey soo dhaweynta balaaran uu u sameeyey, waxaana uu tilmaamay in Puntland ay ka go’antahay kor uqaadista xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxeeya dalka Jabuuti iyo hirgelinta heshiisyada la kala saxiixday.
C/xakiim C/llaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sidoo kale madaxda Dowladda Jabuuti ku ammaanay taageerada kala duwan ee ay Soomaaliya u fidiyaan sida sugida amniga qeybo ka mid ah Gobolada dalka Soomaaliya.
Ergay cusub oo loo magacaabay Soomaaliya
Anti-Muslim film maker arrested.
Xukuumada KMG oo difaacday dastuurka
VIDEO QOSOL BADAN:Wadaado SUUFIYAAL ah oo Sameynaya Wax ay diin ku sheegayaan.